भारतले नचाहेको भए न माओबादिले यत्रो लडाइ गर्न सक्थे न त भुटानीहरु खुरुखुरु भुटानबाट खेदिन्थे । जसले हुर्कायो कर्म दियो उसले त जति सुकै दर्शनबादिलाई पनि नचाउने नै भयो नि । जनताले आगो बाल्न र बाटो छेक्न बाहेक अरु जान्दैनन !
ढुंगेल जी ! तपाईको आलेखमा बचे खुचेको कुरा सायद पान्डा जी को कमेण्टबाट पुरा भएको छ ।
कस्को चरित्र कस्तो भन्ने बारेमा चाही 'हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत' जस्तै हाम्रा सबै नेताहरु एउटै ड्याङका मुला हुन भनेर बुझ्दा परक नपर्ला ।